“Waxaan ku riyoonayay in Neymar Jr uu ku biiro Real Madrid” – Roberto Carlos – Gool FM
(Madrid) 27 Mar 2020. Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Roberto Carlos ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu xiiseynayay in xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Neymar Jr uu ka soot ago naadiga Paris Saint-Germain si uu ugu wareego Los Blancos.
Neymar Jr ayaa u dhaqaaqay kooxda Paris Saint-Germain xagaagii 2017, wuxuuna kaga soo biiray Barcelona, kaddib markii ay kooxda PSG bixisay qiimaha lagu burburiyay qandaraaskiisa, kaasoo lagu qiyaasay 222 milyan euro.
Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Roberto Carlos ayaa u sheegay “Fox Sports”:
“Haddii ay igu xirnaan laheyd wuxuu Neymar joogi lahaa kooxda Real Madrid waqti dheer, laakiin nolosha uma socoto sida uu qofka mar walba doonayo”.
“Xiddigaha waa weyn ee kubadda cagta waa inay u ciyaaraan kooxaha waa weyn ee ugu fiican adduunka, Real Madrid ayaa tixraac u ah ciyaaryahan kasta”.
“Ma dooneysaa inaad ku guuleysato koobka UEFA Champions League? Marka imaaw kooxda Real Madrid”.
Emile Heskey oo u tilmaamay Jack Grealish kooxda uu si wanaagsan ugu soo bixi doono haddii uu ku biiro